काठमाडौं । शंखरापुर नगरपालिकास्थित कालिकाशरण उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भएको महिलाहरूका लागि निःशुल्क पाठेघर तथा क्यान्सर रोग स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सम्पन्न भएको छ। यसका साथसाथै रोगी बालबालिकाका लागि औषधी उपचार वितरण पनि गरिएको छ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. रमेश मल्ल र स्त्री रोग विशेषज्ञ अञ्जली महर्जन तथा दिव्य राईसहितको टोलीले कार्यक्रममा सेवा पु¥याउनुभएको थियो। नेपाल अर्बुध रोग निवारण संस्था, काठमाडौं जिल्ला शाखा, रोटरी क्लब अफ शंखरापुर, रोटरी क्ल्ब अफ बालाजु, बागमती इनर≈वील, रन नेपाल तथा नटओडन रोटरी क्लबको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा स्टार लाइट स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट निःशुल्क औषधी उपल्बध गराइएको थियो।
साथै कार्यक्रममा उपस्थित भएका नेपाल अर्बुध रोग निवारण, काठमाडौं शाखाका सभापतिले क्यान्सर रोकथामजस्ता शिविरहरू रोगीहरूका लागि बढी प्रभावकारी हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
शिविरमा करिब १ सय १७ जना बालबालिकाले स्वास्थ्य उपचार गराएका थिए भने महिलाहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको आयोजक क्लबले जनाएको छ।
यस्ता छन् तरुल खानुको फाइदा
काठमाडौं । नेपाली समाजमा उखान नै छ, ‘पुसमा पाके माघमा जाके’ अर्थात् पुसमा पकाएर माघमा खाने । तरुललाई पुस मसान्तका दिन उसिनेर माघ १ गते खाने परम्परा छ । अहिले बजारमा जताततै तरुल बेच्न...
डीएनएका लागि रगत संकलन गर्दा हातपात
काठमाडौं । निर्मलाकी आमाले डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना दिएपछि परिवारमा विवाद भएको छ । निर्मलाको शरीरबाट निकालिएको डीएनए वास्तविक भए नभएको पुष्टि गर्न निर्मलाकी आमाले रगत नमुना...
सरकारी चिकित्सकद्वारा मन्त्रालय घेराउ
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीयता अनुसारका नयाँ संगठन संरचनाको विरोधमा सरकारी डाक्टरहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा घेराउ गरेका छन्। सरकारी चिकित्सकहरुको...
शिशुको मृत्यु भएपछि पाटन अस्पतालमा तनाव
ललितपुर । शिशुलाई ४५ दिने खोप लगाउँदा शिशुको मृत्यु भएपछि ललितपुरको पाटन अस्पतालमा आन्दोलन सुरु भएको छ । शिशुका आफन्तले अस्पतालले खोप लगाउदा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै आन्दोलन सुरु...
नर्भिकमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुने
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले निकट भविष्यमै कलेजो प्रत्यारोपण सेवाको सुरुवात गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्चालित यस हस्पिटलले नेपाली चिकित्सा फाँटका...
तामाको भाँडामा पानी पिउँदा यस्ता फाईदा
काठमाडौं । हिन्दु परम्परा अनुसार तामालाई पवित्र धातु मानिन्छ र वैदिक कार्यहरुमा तामाको भाँडालाई अनिवार्य मानिन्छ । दैनिक जिवनमा समेत तामाको गाग्रीमा राखेको पानी पिउनु उत्तम मानिन्छ...
इनरुवा । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ शिवगञ्ज टोलमा बीसीजी खोप लगाउँदा एक महीने शिशुको मृत्यु भएको छ । खोपका कारण स्थानीय शिवु खत्वेका एक महीने छोरा शिवम खत्वेको मृत्यु भएको...
काठमाडौं । न्युन आय भएका व्यक्तिहरु धेरै पैसा लाग्ने भयले अस्पताल जान डराउँछन् । र शरिरमा रोग पालेर बस्ने गर्छन् । बिरामीलाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गर्न यो अस्पताल खोलिएको हो । बाँसबाट...
महोत्तरी । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका १२ नैन्हीमा झाडापखालाले थप एकजनाको मृत्यु भएको छ । नैन्हीमा करिब तीन सातादेखि फैलिएको झाडापखालाबाट ६० वर्षीया आइसा खातुनको मृत्यु भएको हो...
म्याग्दी । सदरमुकामस्थित बेनी अस्पताल महिनौँदेखि प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय रुपमा नेतृत्वबिहीन अवस्थामा छ । यसबाट अस्पतालको गतिविधि र सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ । प्रदेश सरकार र...
'टुटल' र 'पठाओ' पहिले झै चल्न दिन निर्देशन
देशभरको मौसम बदलीपछि पानी पर्ने सम्भावना
नेपाल बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न नसक्ने
पाँच लाख नगदसहित १५ जुवाडे पक्राउ
पर्वत बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो
साम्प्रदायीक दङ्गामा परी ८९० जनाको मृत्यु
सुख्खा बन्दरगाहको स्थानीयबासीद्वारा विरोध
देउवा निवासमा सुरक्षा तैनाथ बढाइयो
इलामको थुम्के डाँडामा भ्यु टावर निर्माण गरिने
पर्वतमा बस दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपाली समाजमा उखान नै छ, ‘पुसमा पाके माघमा जाके’ अर्थात्...
काठमाडौं । निर्मलाकी आमाले डीएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना दिएपछि...
आमाबुबालाई बेवारिसे बनाए ५ वर्ष जेल
काठमाडौं । सरकारले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन संशोधन...
काठमाडौं । पासपोर्ट बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ ? कपाल...
शव वाहन नहुँदा जिल्लावासी समस्यामा
तेह्रथुम । तेह्रथुम जिल्लामै एउटा...
नेप्से परिसूचक ३२ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । नेप्से परिसूचक आइतबार...
बालिका भारत लैजान खोज्ने दुई पक्राउ
नुवाकाेट । दुई नाबालिकालाई फकाएर...
जुत्ताको माला लगाउने तीन पक्राउ
सप्तरी । सप्तरीमा ५१ वर्षीया...
रोल्पाको लुङ्ग्रीमा टिपर दुर्घटना
रोल्पा । रोल्पाको लुङ्ग्री...
काठमाडौं । आइतबार बिहानै भूकम्प गएको...